१. विश्वभर कोरोना संक्रमणमा नयाँ रेकर्ड
२. भोलि फेरि बस्ने गरी सकियो ओली-प्रचण्ड छलफल
३. ट्विटर : सबै जनाले मास्क लगाए भने ट्विट सम्पादन गर्न मिल्ने सुविधा हुनेछ
४. यसवर्ष कक्षा ११ को पनि परीक्षा नहुने
५. ओली र प्रचण्डबीच निर्णायक छलफल
६. बागलुङको क्वारेन्टिनमा एक युवकको मृत्यु
७. काठमाडाैँ उपत्यकामा कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै
८. भारतमा एकैदिन २४ हजार बढी कोरोना संक्रमित फेला, ६ सय बढीकाे मृत्यु
९. कञ्चनपुरमा एक जनाको हत्या
काठमाण्डौ : चीनका पूर्व प्रधानमन्त्री ली पेङको सोमबार निधन भएको छ । उनी ९० वर्षका थिए । चिनियाँ सञ्चार माध्यमका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री पेङको सोमबार बेइजिङमा निधन भएको हो । उनी लामो समयदेखि बिरामी रहेका थिए । पूर्व प्रधानमन्त्री पेङलाई सन् १९८९ मा भएको तियानमेन स्क्वायरको नरसंहारका मुख्य दोषीका रुपमा समेत हेर्ने गरिन्छ । अधिकारकर्मीहरुले तियानमेन घटनामा उनको सलंग्नतालाई लिएर ‘बेइजिङको कसाई’ समेत भन्ने गरेका थिए ।
पेङले सन् १९८० र ९० को दशका चिनियाँ सरकारको उच्च पदमा रहेका काम गरेका थिए । प्रजातन्त्रवादी पक्षधरहरुले सन् १९८९ मा बेइजिङको तियानमेन स्क्वायरमा गरेको आन्दोलनमा भएको दमनमा पेङको प्रमुख भूमिका थियो । प्रदर्शनमा चिनियाँ सेनाले बख्तरबन्द गाडीले चलाएर सयौँ नागरिकको ज्यान लिएको थियो । ली पेङले मार्सल ल लगाएर आन्दोलन दबाउन खोजेका थिए । उनले पछि आफ्नो कार्यको बचाउ गर्दै ‘आवश्यक कदम’ को संज्ञा दिएका थिए ।
सन् १९८९ मा तियानमेन स्क्वायरमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका पूर्व महासचिव हु याओबाङको निधनमा शोक सभा भएको थियो । झण्डै एक लाख मानिस तियानमेन स्क्वायरमा उपस्थित भएका थिए । हुको अन्तिम संस्कार हुनुअघि विद्यार्थीहरुले राजनीतिक उदारवाद र सुधारको माग गर्दै तियानमेनमा प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शन दबाउन तत्कालीन चिनियाँ सरकारले चालेको कदमको अहिलेसम्म पनि विरोध हुँदै आएको छ ।
हाम्रो दृटि सवाददाता ८ मिनेट अगाडी
हाम्रो दृटि सवाददाता ४० मिनेट अगाडी